Showing १२१-१३० of ६५४ items.
विकिपिडिया सर्चः किम पहिलो, साहरुख दोश्रो स्थानमा
बलिउड नायक साहरुख खान अहिले चलचित्र ‘जिरो’को छायांकनमा व्यस्त छन् । चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त भएपनि साहरुखको चर्चा विश्वभर विभिन्न कारणले हुने गरेको छ । साहरुखका फ्यान भारतमा मात्र होइन, विश्वभर छन् । उनी विश्वमा सर्वाधिक फ्यान कमाउने भारतीय नायक हुन् । यसैले पनि, साहरुखलाई खोज्नेहरुको संख्या विश्वभर नै छ । नायक साहरुख खान विश्वका दोश्रो धनी कलाकार हुन् । साथमा, उनी विकिपिडियामा सर्वाधिक खोजिने कलाकारको दोश्रो स्थानमा समेत परेका छन् । उनले हलिउडका चर्चित स्टार टम क्रुजलाई समेत उछिनेका छन् । साहरुख खान दोश्रो स्थानमा रहँदै गर्दा रियालिटी स्टार किम कार्दशियनले भने पहिलो स्थान ओगटेकी छिन् । व
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २१, २०७४
अप्सनको नृत्य प्रतियोगीताको उपाधि लिटल एन्जललाइ
पथरी । संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन(अप्सन) मोरङको आयोजनामा भएको अन्तर विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिताको उपाधि उलाबारी –५ को उर्लाबारी लिटल एन्जल स्कुलले जितेको छ । मोरङको उर्लाबारीको किरात राई योयाक्खाको भवनमा भएको प्रतियोगितामा हिजोराती सपनीमा.......को बोलको गीतको सामूहिक नृत्यले उपाधि जितेको हो । त्यसैगरी उलाबारी–६, मा स्थापीत कुडोस विद्या सदन स्कुलले दोस्रो स्थान जितेको छ । कुडोसले सिमसिममे पानीमा............बोलको गीतमा सामूहिक नृत्य गरी दोस्रो स्थान जितेको हो । त्यसैगरी उर्लाबारी –५,को पल्वी विद्या मन्दिरले तृतीय स्थान जितेको छ । पल्वीले कुटुमा कुटु बोलको गीतमा सामूहिक नृत्य गरी तेस
सलमान न अाएर के भाे ? सनम आएर जावलाखेलमा नचाए नेपाली दर्शक
ललितपुर । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठनले चेतावनी दिएपछि भारतीय अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द भएको छ । भारतीय 'सांस्कृतिक आक्रमण' भन्दै ‘जे पनि हुन सक्ने’ चेतावनीसहित आयोजकलाई कार्यक्रम रद्द गर्न विज्ञप्ति निकालेपछि राजधानीमा हुने भनिएको कार्यक्रम रद्द गर्नुपरेको थियो । तर, शनिबार भारतीय कलाकारहरुले राजधानीमा नै भव्य कार्यक्रम गरेका छन् । त्यसलाई भने नेकपाले कुनै पनि अवरोध गरेन । चर्चित भारतीय व्यान्ड सनमले ललितपुरको जवलाखेलमा कार्यक्रम गरेको हो । पूराना गीतहरुको कभर गर्ने देखि आफ्ना नयाँ गीतहरुका लागि चिनिएको ब्याण्ड भारतको शीर्ष १० स्वतन्त्
सलमानलार्इ देखाएर उठाएकाे ५ कराेड रूपैया के हाेला ?
काठमाडौं । आउदो मार्च १० मा हुने भनेको कार्यक्रम विप्लव माओवादीको चेतावनीका कारण स्थगित भयो । उक्त शोका लागि सलमान र उनको टिमका सबैले पारिश्रमिक अग्रिम लिइसकेको बुझिएको छ । सलमानको टिमलाई बैंकमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ पठाइसकिएकाले ढिलो चाँडो कार्यक्रम गर्नैपर्ने दवाव आयोजकलाई छ । टिममा रहेका १ सय १० जनालाई उनीहरुकै खातामा पैसा पठाएको आयोजक स्रोतले बतायो । तत्कालिक परिस्थितिमा कुनै अवरोध आए केही समयका लागि स्थगित गर्न सकिने ओडीसीले सोहेल खान प्रोडक्सनसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर सँधैका लागि रद्द गर्न सकिने विषयमा केही उल्लेख छैन । त्यसैले यदि ओडीसी इन्टरनेसनलले भविष्यमा यो कार्यक्रम गर्न स
माग्ने एक्लैले हाेलीमा २३ हजारको खसी ढाले
केदार घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ को प्रमुख भूमिका रहेको फिल्म ‘राम कहानी’को सुटिङ अहिले पोखराको कालाबाङ भन्ने ठाउँमा भइरहेको छ । सुटिङ युनिटले बिहिबार सिंगै खसी ढालेर होली मनायो । यसको रोचक किस्सा रहेछ । ‘होली कसरी मनाउने त ?’ भनेर सुरु माग्नेबुढासहित केही कलाकारहरुबीच वातचित सुरु भयो । सबैले अलिअलि पैसा उठाएर खसी काट्ने सल्लाह गरे । माग्ने बुढाले भने, ‘ल, ठिक छ म ५ हजार हाल्छु ।’ अर्का कलाकार विल्सन विक्रम राई ‘तक्मेबुढा’ पनि जोशिए । उनले भने, ‘मामा (माग्ने) लाई त मैले कसरी टप्नु, उहाँभन्दा एक रुपैयाँ कम चार हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ रुपैयाँ म हाल्छु ।’ सबैले यसरी आ-आफूले दिने रकम बोलिरहेका थिए । यत
विरक्तिएका माग्नेबुढाले सलमान खानमाथिको टिप्पणीमा माफी मागे
हास्यकलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ एकाएक विरक्तिएका छन् । विरक्तिनुको कारणले हो, उनले हिजो फेसबुकमा पोष्ट गरेको स्टाटसमा निम्तिएको विवाद । उनले भारतीय अभिनेता सलमान खानको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको विषयमा उनले सो स्टाटस लेखेका थिए । सलमान नेपाल नआउँदैमा दुखी हुनु नपर्ने उनको टिप्पणी थियो । यसमा उनको पक्ष र विपक्षमा कैयन् प्रतिक्रिया आए । पोखरामा रामकहानी फिल्मको ‘होलनाइट’ सुटिङमा रहेका बेला उनको फोनको घन्टी ट्याङ ट्याङ बजिरह्यो । एउटा कलाकार कलाकार भएर अर्को देशको कलाकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भनेर धेरैले उनलाई पाठ पढाउन खोजे । थुप्रै कलाकारहरुले फोन गरेर ‘त्यस्तो नलेखेको भए हुन्थ्यो’
यस कारण स्थगित भयो सलमानको “नेपाल दबङ टुर”
बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । खानको ‘दबंग द टुर’ १० मार्चमा काठमाडौंमा हुने तय भएको थियो । तर, विप्लव समूहको चेतावनीलाई कारण देखाउँदै सलमानले नेपाल नआउने सन्देश पठाएपछि आयोजक ओडीसी इन्टरनेसनलले ‘दबंग द टुर’ रद्द गरेको हो ।सलमानको ‘दबंग द टुर’ १० मार्च अर्थात्मा फाल्गुण २६ गत्ते काठमाण्डुमा हुने तय भएको थियो । टुँडिखेलमा हुने शोमा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल लगायतका कलाकार पनि उपस्थित हुने भनिएको थियो । विकाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रचार न्यूनिकरण गर्दै नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश दिन कार्यक्
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १८, २०७४
‘सत्रु गते’ ट्रेलर रिलिज, कमेडी र रोदनको मिस्रण (ट्रेलर सहित)
फिल्म ‘सत्रु गते’ को ट्रेलर रिलीज गरिएको छ । आगामी चैत्र ९ गतेकाट प्रदर्शनको तयारिमा रहेको यो फिल्मको ट्रेलरमा कमेडी र रोधन देख्न सकिन्छ । मह संचारको प्रस्तुतिमा किरण केसिले निर्माण गरेको फिल्म ‘सत्रु गते’ फिलममा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, आँचल शर्मा, पल शाह, किरण केसी, राजाराम पौड्याल, बसुन्धरा भुसाल शिवहरी पौड्याल लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्ममा दीपक राज गिरि, दीपा श्री निरौला, नरेन्द्र कँसकार, शिबहरी पौडेल, यसोधा श्रेष्ठ, रमिला आचार्यको संयुक्त लगानी रहेको छ । प्रदीप भट्टराईको निर्देशन रहेको फिल्ममा हरिबंश आचार्य
दिल्लीमा अाफुलार्इ दाह्री काट्न लगाएकाे सम्झदै माग्ने बुढाले भने सलमान नआउँदा दु:ख नमाने हुन्छ
भारतीय अभिनेता सलमान खानको नेपाल यात्रा स्थगित भएपछि सामाजिक सञ्जाल तरंगित भएको छ । कलाकार्मीदेखि सर्वसाधारणसम्मले विभिन्न खाले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । देशको जल्दोबल्दो विषयमा तत्काल समाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने एक कलाकार हुन् केदार प्रसाद घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ । उनले सलमानको कन्सर्ट स्थगित हुँदा धेरै दुख मान्नु नपर्ने भन्दै तात्तातो स्टाटस लेखेका छन् । माग्नेबुढा लेख्छन्, ‘इजरायल जाँदा मलाई दिल्लीमा दाह्री काट्न दिइएको दवाव, सुदरपश्चिमका जनताले भारतमा काम गरेर फर्किँदा बोर्डरमा सहेको हेपाई, कपिल आउँदा जितु नेपालको अपमान, सिमाना मिचाई, बेला-बेला नेपाल छिरेर गर्ने उपद्रो आदि हेर्दा सलम
अर्धनग्न भैंसी नचाउने महोत्सव बन्द गरौ, बरु राजस्व असुल्ने देहव्यापार खोलौ
देशमा अचेल महोत्सवको चटारो बढेको छ । तिनै सिजनेवल महोत्सवहरुमा प्रस्तुति दिने देशका नग्न गहनाहरुको चर्चा पनि खुबै चलेको छ । जिउ डाल हेर्दा नत चट्टक मिलेको छ, बरु नाङ्गा भैंसी जस्तै देखिन्छन । गायको स्वर सुन्दा नत सुरिलो मनमोहक बनाउ छ, बरु बगेर्नो भैंसी कराएको जस्तो सुनिन्छ । नृत्य हेर्दा नत मनै लोभ्याउने अदायं छ, बरु नाङ्गो भैसी राँगा खोजेर ब्रुक-ब्रुक उफ्रे जस्तो देखिन्छ…। तर पनि तालि गडगडाहट छ, वान्समोरको कोकाहल मच्चिएको छ, ति कुन आत्माका मनोरञ्जक हुन् बुझ्नै गाह्रो छ, सायद ति कोकाहलमा उफ्रिने जमात पनि भैसी युगका मानवहरु हुन् । महोत्सव कुनै काम विशेषका लागि मेला लगाईने एउटा पर्व हो । गा